NS Media | निषेधाज्ञा भए पनि किन बढिरहेको छ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण ?
काठमाडौँ, १२ भाद्र । नेपालमा दोस्रो कोरोना संक्रमित देखिएसँगै चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन १२० दिनपछि साउन ६ गते हटाउने निर्णय भएको थियो । साउन ६ गते नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १७ हजार ९९४ रहेको थियो । सो अवधिमा जम्मा ४० जनाको मृत्यु भएकामा अहिले संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको संख्या निकै नै बढेको छ । संक्रमणको जोखिम कम गर्न विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।
बिहीबार हालसम्म कै सर्वाधिक संक्रमण १ हजार १ सय ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । शुक्रबार थप ९२७ जनालाई कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३६ हजार ४ सय ५६ पुगेको छ ।
शुक्रबारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १९५ पुगिसकेको छ भने डिस्चार्ज हुनेको संख्या २० हजार २ सय ४२ को छ ।
देशभरी कोरोना संक्रमणको संख्या बढिरहँदा काठमाडौं उपत्यकामा पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । संक्रमितको संख्या बढेपछि उपत्यकामा भदौ ३ देखि १० गतेसम्म निषेधाज्ञा गरिएको थियो । भदौ ३ मा उपत्यकामा संक्रमितको संख्या जम्मा २ हजार ४९८ रहेको थियो । संक्रमितको संख्या थपिएपछि निषेधाज्ञा बढाएर भदौ १७ सम्म गरिएको छ ।
उपत्यकामा बिहीबार ३७७ जना संक्रमित भेटिएिकोमा शुक्रबार झन् बढीमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ । शुक्रबार उपत्यकामा २४ घन्टामा थप ४ सय १५ संक्रमित पुष्टि भएको हो । वाग्मती प्रदेशको तथ्यांक अनुसार बिहीबारसम्म उपत्यकामा जम्मा संक्रमितको संख्या ४ हजार ४०५ रहेको थियो ।यो सँगै काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म जम्मा संक्रमितको संख्या ४ हजार ८२० पुगेको छ ।
ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी उपत्यकामा निशेषाज्ञा लागू गरे पनि संक्रमितको संख्या अझै थपिँदै जाने बताउँछन् । ‘निषेधाज्ञाले संक्रमितको संख्या घट्ने होइन, निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन अझै १४ दिन लाग्छ । यो भन्दा अगाडि शरीरमा भाइरस पसिसकेकालाई अहिले देखिन्छ । यो प्रभावकारी भयो कि भएन १७ गतेपछि थाह हुन्छ,’ उनले भने, ‘भाइरस पसेको त १० देखि १४ दिनभित्र देखिने हो । तीजका समयमा धेरै भिडभाड भयो । भिडभाड हुनेबित्तिकै त्यहाँ कोरोना संक्रमणको जोखिम भइहाल्छ । भिडभाड व्यवस्थापन गरिएको छैन । सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । चैत १० गते सरकारी कार्यालयमा जस्तो भीड हुन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै छ ।’
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले निषेधाज्ञा आफैँमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उपाय नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार निषेधाज्ञाले महामारी नियन्त्रण गर्न थप तयारी वा मौकाको रुपमा लिन सकिन्छ । निषेधाज्ञाको समयले कमजोरीहरुको पहिचान गरेर बलियो बनाउन समय दिन्छ । ट्रेसिङ र आइसोलेट प्रभावकारी रुपमा भएन भने कोरोना नियन्त्रण हुनै नसक्ने उनको तर्क थियो ।
‘मानिसहरु अहिले टाढा गएका छैनन् होला, घरभित्रै छन् वा घर वरिपरी टोलमा घुमिरहेका छन् । घर अनि टोल भित्रभित्रै सरिरहेको हुन सक्छ । लक्षण देखिए पनि यातायात तथा अरु कडाइले मानिसहरु परीक्षण गर्न जान पाएका छैनन् । झन् त्यो संक्रमण भित्रिभित्रै पाकेर बस्ने डर पनि छ,’ उनले भने ।
डा. सुवेदीले कन्ट्क्याट ट्रेसिङमा खासै प्रगति भएजस्तो नलागेको बताउँदै धेरै परीक्षण गर्ने र कन्ट्क्याट ट्रेसिङ गरेर संक्रमित पत्ता लगाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले निषेधाज्ञा गरेर कन्ट्क्याट ट्रेसिङ बलियो बनाइएको छ कि छैन र सबैलाई परीक्षणको पहुँच छ वा छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । पीसीआर परीक्षण पनि महंगो भएको र परीक्षण सजिलो बनाउने उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाए ।
त्यसैगरी जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे निषेधाज्ञा लागू भए पनि काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या नबढ्न दिन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ परीक्षणको दायरा निकै साँघुरो छ, जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा ६० लाख जनसंख्या छ, यहाँ दिनको दुई तीन हजार व्यक्तिको पीसीआर टेस्ट गर्दा संक्रमणको अवस्था के छ भन्ने थाहा हुँदैन ।’
उनी पुलिंग मेथड अपनाएर दिनको ५०–६० हजार जनाको परीक्षण गर्ने, वडावडामा शंकास्पद ठाउँमा खोजीखोजी परीक्षण गर्ने तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने कोरोना संक्रमणको धरातलीय यथार्थता थाहा हुने बताउँछन् । उनले निषेधाज्ञाको प्रभाव अहिले हैन १० दिनपछि देखिने बताउँदै भदौ १७ गतेपछि निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने र जनस्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ अनुगमन र निगरानी गर्ने हो भने संक्रमण घट्दै जाने बताए । ‘१० दिनपछि संक्रमण घट्दै गएन भने कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिने जोखिम रहन्छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले संक्रमितको संख्या घट्न अझै समय लाग्ने बताए । ‘बन्दाबन्दी नभएको भए अझै संक्रमितको संख्या बढ्थ्यो, नबढोस् भनेरै नै निषेधाज्ञा गरिएको हो । यसको असर अबको हप्ता दश दिनमा देखिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ‘टेस्टिङ, ट्रेसिङ तथा आइसोलेट तथा अस्पताल व्यवस्थापनको कार्य पहिलेभन्दा बलियो बनाइएको छ ।’